Himiladii Hungawday!!!!! W/Q:Ridwan Xuseen Yuusuf(Bukhaari) | Horn Cable TV
27th October 2016 at 8:49 pm
Himiladii Hungawday!!!!! W/Q:Ridwan Xuseen Yuusuf(Bukhaari)
Posted by Hassan Galaydh Nolosha bini aadamku waxay ku salaysan tahay hami iyo hididiilo qof walina waxa uu leeyahay hadaf iyo hiigsi naftiisa u gaara kaas oo uu ku qaabilayo mustaqbalka noloshiisa.
Dad badan ayaa nolosha ka guulaysta halka qaar kalena hareer maraan dariiqaasi,hadaba waxa dad badani u hamuun qabaan siday hamigooda u meel marin lahaayen iyaga oo meel dheer iyo meel gaaban ba u kora siday hamigood u meel marin lahaayeen laakin aanay u suuro galin waayo gayiga ay ku nool yihiin maaha gayi laga tix galinayo aqoon.
Taasina waxay niyad jab iyo ciirsi la’aan ku tahay kumanaan dhalinyaro ah taasi oo sababaysa inay ka dhacaan nolosha kuna bii meeyaaan nafohooda badaha,waayo waxa loo nool yahay waa is badal nololeed
Oo ku qaadatid mustaqbalka noloshada dambe.
Himiladii hungawday waa mid haysata dhalinyaro badan taasi oo ku sababtay inay ka niyad jabaan dhulka ay ku uuman yihiin taas oo ay ku keentay nin jeclaysiga iyo qabyaalada aafaysay gayigood oo hoos u dhigtay hamigood ahaa markaad wax barashada dhamaysid waxaad wax ku soo kordhin doonta dalkaaga,dadkaaga iyo waliba mustaqbalkaaga.
Waxaa ka arkaysa magaaloyinka Somaliland dhainyaro badan oo wax baratay hadana camal la’aani hayso oo hadh iyo habeen camiraya meheradaha shaaha iyo waliba meelaha waqtiga lagu lumiyo.
Xukuumada Somaliland ayaa in badan shaacisa inay shaqo u abuur u samaynaso dhalinyarada laakiin arinkaasi ayaa noqday hal bacaad lagu lisay.
W/Q:Ridwan Xuseen Yuusuf(Bukhaari)